Nilaza Ireo Mpanohana An’i Navalny Fa Ireo Hiringiriny Tohanan’ny Fanjakana no Nanafika An’i Nalvany · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Mey 2017 5:07 GMT
Igor Beketov, antsoina hoe Gosha Tarasevich, lehiben'ny SERB. Sary: LiveJournal
Tamin'ny Alatsinainy, nanaporofo ny lehiben'ny mpanohitra, Alexey Navalny fa ilaina ny manana tanora mpanohana an-tapitrisany ao Rosia, izay mpiserasera aterineto mavitrika. Andro vitsy taorian'ny nanafihana an'i Navalny tao ivelan'ny biraony ao Moskoa, nanao fihetsiketsehana tao amin'ny aterineto ireo mpanohana azy mba hamantatra izay hita fa meloka: dia ireo mpikatroka avy amin'ny hetsika antsoina hoe “Vondrona Rosiana Atsimo Atsinanana,” fantatra kokoa amin'ny hoe SERB.
Tamin'ny 27 Aprily, nisy lehilahy iray nanondraka famonoana otrikaretina miloko maitso tamin'ny tavan'i Navalny tao ivelan'ny biraon'ny Fikambanana Miady Amin'ny Kolikoly ao Moskoa. Nandositra avy hatrany ilay nahavanon-doza, ary nampidirina hopitaly fotoana fohy i Navalny, izay voalaza fa may ny masony havanana. Miahiahy ny dokotera fa mety nafangaro zavatra hafa ankoatra ny famonoana otrikaretina maitso ilay ranon-javatra, noho ny ratra mafy mahazo an'i Navalny, izay midika fahasimbana tanteraka amin'ny fahitàny.
Ora fohy taorian'ny fanafihana, nampiasa ny fantsony YouTube vaovao mivantana, nizara ny lahatsary tamin'ny fakan-tsary fiarovana nipetraka tao anatin'ny tranobe misy ny biraony i Navalny, mampiseho ny fanafihana avy ety amin'ny varavarana miodina eo anoloana.
Tamin'ity herinandro ity, tonga niasa ireo mpanohana an'i Navalny.
Somary manjavozavo sy ratsy sary ny lahatsary tamin'ny fakan-tsary fitsikilovana, saingy ampy hiteraka fitadidian'ny olona. Tamin'ny Alatsinainy, nanoratra tao amin'ny bilaoginy ny mpisera Twitter iray antsoina hoe “Ramose Radmir” fa fantany ilay mpanafika tamin'ny lahatsary: Alexander Petrunko, mpikatroka malaza ao amin'ny SERB.
Ary tsy ity ihany no lahatsary tamin'ny fanafihana an'i Navalny. Tamin'ny Alahady, nandefa lahatsary samihafa ny tambajotra fahilavitra mpanohana an'i Kremlin, Ren-TV (toa lahatsary narakittry ny olona nahanfantatra ny fiavian'ny fanafihana), noho ny antony manokana, natao manjavozavo ny tavan'ireo roa lahy – ny mpanafika sy ny mpanatrika teo akaiky.
Tao anatin'ny ora vitsivitsy, na dia izany aza, nipatrika manerana ny habaka ny endrik'ilay lehilahy faharoa, rehefa nahita ilay mpanohana an'i Navalny antsoina hoe Eugene Bryzgalin fa nahitana dika telo hafa tamin'ny lahatsarin'ny fanafihana ny tranonkalan'ny Ren-TV, anisan'izany ny lahatsary iray nahitana tsara ny endriky ny mpitazana iray.
Alexey Kulakov ity lehilahy faharoa ity, mpikambana hafa ao amin'ny SERB, izay niaiky (tsy fidiny) tamin'ny gazety Novaya Gazeta avy eo fa nanatrika ny fanafihana an'i Navalny izy, na dia nisisika nilaza aza izy fa tsy nahafantatra izay zavatra hitranga. “Nankany aho mba haka sary amin'ny fakan-tsariko fotsiny. Nisy olona niantso ahy ary nilaza fa hisy zavatra nomanina hitranga ao amin'io toerana io”, hoy i Kulakov, tsy nety nilaza izay olona niantso azy.
@yurilaz @RuslanLeviev @alexlitreev Есть фото получше, доказывающее знакомство pic.twitter.com/LOECKUbdIS
— Александр Кукин (@twicehti) May 1, 2017
Ity sary mazava mampiseho fa mifankafantatra izy ireo
Mandritra izany, nahita sary maromaro ireo mpiserasera aterineto, izay maneho fa mifankafantatra tokoa i Kulakov sy Petrunko, izay mitombina tokoa noho izy ireo samy mpikambana ao anatin'ny vondrona politika hiringiriny
Iza i Alexander Petrunko?
Alexander Petrunko sy Pyotr Tolstoy. Sary: Alexey Navalny / Twitter
Hatramin'izao, fantatra kokoa ho nitifitra ranon-javatra ratsy fofona (nilaza ny sasany fa amany izany, ny hafa nilaza fa zavatra simika, ary i Petrunko tenany efa nilaza fa fotaka avy ao Krimea izany) tamin'ireo mpaka sarina ankizy miboridana an'i Jock Sturges nandritra ny fampiratiana mampiadihevitra tao Moskoa i Petrunko. Nigadra herinandro izy noho izany hadalana izany, nahazo laza ho mpitolona ara-pitondran-tena mba hampitsahatra ny vetaveta atao amin'ankizy.
Taorian'ny famotsorana azy, nandritra ny antsafa niaraka tamin'ny tranonkala Znak.com, nilaza i Petrunko fa niaina horohoro isan-karazany izy nandritra ny fahazazany tany amin'ny trano fitaizana zaza kamboty, ary nanatrika, fony izy 10 taona, ny fihazan'ny polisy an'i Andrey Chikatilo, Sovietika mpamono olona izay efa namono zaza amam-behivavy miisa 52 fara fahakeliny teo anelanelan'ny taona 1978 sy 1990.
Natosiky ny tolona ara-pitondratena, nanatevin-daharana ny hetsika «Lohataona Rosiana» i Petrunko taty aoriana ary nankany Okraina mihitsy aza, sy nandray anjara tamin'ny fibodoana ny fitantanana ara-paritra ao Kharkiv tamin'ny Aprily 2014. Noho ny zava-bitany, nogadrain'ny mpitandro ny filaminana Okraniana i Petrunko, izay nolazainy fa “naka an-keriny sy nampijaly azy”.
Tamin'ny Alatsinainy, nizara sary (eo ambony) mampiseho an'i Petrunko mijoro eo akaikin'i Pyotr Tolstoy, filoha lefitry ny Duma-mpanjakana, Antenimieram-pirenena ao amin'ny parlemantan'i Rosia i Navalny. Tsy mazava ny zavatra niarahan'ny roa tonta natao.
Inona ny SERB?
Lehilahy antsoina hoe Igor Beketov, izay matetika antsoina amin'ny anarana hoe Gosha Tarasevich ny lehiben'ny SERB. Mpiantsehatra matihanina sy, araka ny filazany manokana, tompon-daka Sovietika amin'ny basketball, nanangana ny SERB tao Okraina, toerana nandaniany ny ankamaroan'ny fiainany i Beketov. Nantsoina tany am-boalohany hoe Vondrona Mahery Fihetsika Atsimo Atsinanana, niorina tao Dnepropetrovsk ho hetsika hampiroboroboana ny “Lohataona Rosiana” ny SERB satria nirodana ny fitondran'i Yanukovych tao Okraina.
Tamin'ny volana Martsa 2015, niresaka tamin'ny tranonkala Medialeaks.ru i Beketov, nilaza fa nifindra tao Rosia izy rehefa “namorona tranga heloka bevava hanenjehana azy noho ny fivadihana” ny polisy Okraniana”. Nanaraka azy tao Rosia ny mpikatroka sasany tao amin'ny SERB, saingy nilaza i Beketov fa nanatevin-daharana taorian'ny fifindram-ponenana ny ankamaroan'ireo mpikambana ambony vaovao ao amin'ny vondrona.
Ankehitriny, ny tena lasibatry ny SERB dia ireo mpikambana ao amin'ny mpanohitra Rosiana, ary niresaka an-karihary momba ny “fitomboan'ny fanafihana” an'ireo izay “manevateva an'i Rosia, ny filoha sy an'i Krimea”. nilaza mihitsy aza i Beketov fa miaro izay filoha Rosiana ny vondrona- fa tsy i Potinina ihany – ary nanipika fa nisoroka ny fanafihana an'i Alexey Navalny ny SERB satria nilaza izy fa tsy hamerina an'i Krimea amin'i Okraina rehefa lasa filoha.
Taloha, niara-niasa tamin'i Igor Brumel, mpanao lalàna ao an-toerana ao amin'ny faritr'i Moskoa sy mpikambana ao amin'ny antoko politika Rosiana Manan-Drariny ireo mpikatroka ao amin'ny SERB. Tamin'ny volana Oktobra teo, namaky ny oron'izay mpikatroka miambina ny tsangambato fahatsiarovana an'i Boris Nemtsov ao amin'ny tetezana Bolshoy Moskvoretsky ao Moskoa i Brumel sy Petrunko. Nampangain'ny polisy ho nanao asan-jiolahimboto avy eo ny lasibatra (tsy i Brumel na Petrunko).
Ary tsy vao sambany ny SERB no nanafika ny “Tetezana Nemtsov”. Tamin'ny volana Martsa 2015, namotika ny Fahatsiarovana i Beketov sy olona maromaro, nitifitra loko teo amin'ny sarin'i Nemtsov ary nametaka taratasy mivaky hoe: “Mpamadika ny tombontsoan'i Rosia!”
— Алла Наумчева (@AllaNaumcheva) August 13, 2016
Tamin'ny Aogositra teo, nitarika vondrona mpikatroka SERB tamin'ny fanafihana ireo tangoron'olona mpanao fihetsiketsehana manohitra ny ady tao Moskoa ihany koa i Beketov. Rehefa nipoaka ny fifandirana, niditra an-tsehatra ny polisy, nomen'i Beketov totohondry teo amin'ny tavany mihitsy aza ny polisy iray.
Nifarana tamin'ny volana Febroary 2016 ny fampiatoan'ny SERB ny fanafihana an'i Navalny (tokony ho herintaona taorian'ny antsafa tamin'ny Medialeaks), rehefa nitoraka mofomamy teo amin'ny tavan'i Navalny tao ivelan'ny biraon'ny Fikambanana Miady amin'ny Kolikoly ao Moskoa i Petrunko. Namerina ny fanafihana ny SERB roa volana tatỳ aoriana, ka mbola nitifitra zavatra simika ratsy fofona tamin'i Navalny ihany.
Na dia teo aza ny tantarany momba ny herisetra, vao haingana i Beketov no vahiny tao amin'ny “Duma”m-panjakana ao Rosia, antenimierampirenen'ny parlemanta federaly. Tamin'ny 26 Aprily, iray andro mialoha ny fanafihana an'i Navalny tamin'ny herinandro lasa, nirehareha tao amin'ny LiveJournal mikasika ny fitsidihany tao amin'ny Duma noho ny “fangatahana ofisialy” avy amin'ny solombavambahoaka Duma tsy nitonona anarana i Beketov.
“Nihaino tsara, nihaino manontolo ny zava-niainan'ny SERB tamin'ny fiatrehana ny fikasana hikarakara fitroarana amin'ny endrika Maidan ao Rosia ireo solombavambahoaka,” Nanoratra, nizara ny sariny teo akaikin'ny sary goavan'i Vladimir Potinina sy ilay mpanao politika Rosiana nasionalista Vladimir Zhirinovsky i Beketov.